Ungazidlulisa kanjani izingxoxo ze-WhatsApp kusuka ku-iPhone ziye ku-Android noma okuphambene nalokho | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | | Android, Okokufundisa namanyuwali
Kokubili i-iOS ne-Android kusinikeza izinketho eziningi zokugwema ukulahlekelwa yidatha inqobo nje uma sisesigcawini esisodwa. Izipele ezikwi-iCloud noma ku-akhawunti yethu yakwaGoogle zisuka ku-Android ziye kwenye noma zisuka ku-iPhone iye kwenye zidlala ingane nokuthi asilahlekelwa yikho konke okuqukethwe i-smartphone yethu yangaphambilini okwakumele ikwazi ukuqhubeka nakho okusha njengoba ukube bekungekho okwenzekile. Kepha ¿kwenzekani lapho sifuna ukusuka ku-iPhone siye ku-Android noma kusuka ku-Android kuya ku-iPhone?
Kulokhu izinto ziguquka kakhulu. Uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo lungaba neziphakeli zalo zokonga idatha nokuthi luhambisana ne-Android ne-iOS, njengoba kunjalo ngeTelegram, bese ushintsho lungeke lubonakale, kepha uma kungenjalo, njenge-WhatsApp, iqiniso ukuthi kuzoba nzima ukungalahlekelwa yizo zonke izingxoxo zethu nezithombe lapho sisuka ku-iOS siye ku-Android noma okuphambene nalokho. Kepha kunezindlela zokukufeza futhi lapha sikutshela okuqonde kakhulu futhi okulula kakhulu.
1 I-Tenorshare iCareFone
Inqubo yokudlulisa izingxoxo zeWhatsApp kusuka ku-iPhone iye ku-Android, noma okuphambene nalokho, ingaba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kuya ngohlelo esilusebenzisayo. Abafana baseTenorshare basebenzise uhlelo lwethu lwe-iCareFone, isicelo sokuthi, ngaphezu kokusivumela dlulisa idatha ye-WhatsApp kusuka kwipulatifomu eyodwa yeselula iye kwenye, kusivumela nokuthi sidlulise izithombe zisuka ku-iPhone, iPad noma iPod touch yethu siye kwikhompyutha yethu ngaphezu kwe-iTunes, ukukopisha umculo, izincwadi nezithombe kudivayisi yethu, susa izinhlelo zokusebenza ... konke ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes nganoma yisiphi isikhathi
Ukudlulisa imininingwane ye-WhatsApp kusuka ku-iPhone yakho noma kuya kufoni ye-Android, nge-iCareFone kuyinqubo elula (ebalulekile) futhi esheshayo (izinyathelo okufanele zilandelwe), ngoba ubude bokugcina buzoncika enanini lezithombe namavidiyo esiwagcinile i-akhawunti yethu ye-WhatsApp yedivayisi yethu. Inqubo kufana ncamashi nazo zombili izinhlelo zokusebenza.
Lapho sesenze uhlelo iCareFone, kumele xhuma womabili amadivayisi, umthombo nendawo oya kuyo kwikhompyutha yethu futhi ngohlelo lokusebenza khetha okuzoba ngumthombo wedatha (lapho sifuna ukukhipha khona idatha) kanye ne-ukuphela okuyiwa kuyo (lapho sifuna ukukopisha khona). Uma sekusunguliwe, chofoza ku-Transfer (kithi, sizodlulisa izingxoxo ze-WhatsApp zisuka ku-iPhone 6s ziye kwi-Samsung Galaxy).
Lapho nje sichofoza inkinobho yokudlulisa, uhlelo lokusebenza luzolunakekela yenza ikhophi layo yonke idatha kwikhompyutha yethu, kufaka phakathi konke okunamathiselwe futhi kuzokwakha ifayela elibuyisayo elizobuyisa, lixolelwe ukungasebenzi, idivaysi ekhonjiwe.
Njengoba ngiphawulile ezigabeni ezedlule, kuya ngolwazi esinalo kwikhophi yethu ye-WhatsApp, inqubo ingathatha isikhathi esiningi noma esincane. Phakathi nayo yonke inqubo, Akufanele sinqamule noma yimaphi amatheminali kukhompyutha lokho kuyingxenye yenqubo uma singafuni ukuthi inqubo ingenziwe kahle.
iCareFone iyatholakala kuzo zombili IWindows ngokuqondene neMacOS.
Ukwenza lo msebenzi onzima singathola izindlela ezihluke kakhulu kwi-intanethi, iningi lazo liyinkimbinkimbi kakhulu futhi azisebenzi, noma ezimweni ezinhle kakhulu bakwenza kancane. Kuzo zonke izinketho ezizanyiwe, leyo enginike imiphumela emihle kakhulu uhlelo lokusebenza lweWindows ne-Mac «dr. fone »ne-Tenorshare iCareFone ongalanda kusuka ku- lesi sixhumanisi nokuthi ungazama mahhala. Kuyinto uhlelo lokusebenza olwenza okungaphezu kokudlulisa imiyalezo yakho kusuka ku-iOS kuya ku-Android, kepha kule ndatshana okusithandayo yikho lokho, ngakho-ke sizogxila kuleso sici.
Nakhu ukuthi bakubuka kanjani ngeselula yakho ye-Android
Lapho uhlelo lokusebenza selulandiwe kukhompyutha yethu, sizolukhipha bese sixhuma amadivayisi womabili ngezintambo zawo ze-USB kwi-Mac noma i-PC. Kufanele samukele yonke imilayezo edinga izimvume ezivela kithi, ikakhulukazi kudivayisi ye-Android lapho kuzofakwa khona isoftware edingekayo. ukuze yonke into isebenze njengoba kufanele. Uma konke sekumi ngomumo, sizoqhubeka nokufaka isigaba esisithandayo: "Isipele nokubuyiselwa".
Ewindini elilandelayo sikhetha kubha eseceleni kwesokunxele inketho "Yenza isipele futhi ubuyisele i-WhatsApp", kanye nezinketho ezahlukahlukene esingazenza ezihlobene nohlelo lokusebenza lokuthumela imilayezo zizovela. Kulokhu sikhetha eyokuqala: «Dlulisa imiyalezo ye-WhatsApp».
Amadivayisi ethu amabili azobe esevela, umthombo wedatha ngakwesobunxele kanye nomamukeli ngakwesokudla. Le mininingwane ibalulekile ngoba kufanele siqiniseke ukuthi zibekwe endaweni efanele, ngoba idivaysi engakwesokudla, yona ezokwamukela idatha, izolahlekelwa yiyo yonke imininingwane ye-WhatsApp obekufanele ibuyise entsha. Uma i-oda lingalungile, chofoza inkinobho emaphakathi ethi «Flip». Lapho sesiqinisekisile ukuthi idivayisi yoqobo ingakwesobunxele nokuthi indawo okuyiwa kuyo ingakwesokudla, singachofoza kunkinobho ethi «Dlulisa».
Kuyinqubo ethatha imizuzu eminingana, ngakho-ke yiba nesineke, futhi noma ngabe ucabanga ukuthi uhlelo luvinjelwe, linda luze luphele. Lapho ukudluliswa sekuqediwe, kufanele siye kudivayisi yethu yendawo futhi silandele izinyathelo ezikhonjisiwe. I-WhatsApp izovela kithi sengathi sisanda kuyifaka, futhi kuzofanele nokuthi silungiselele inombolo yethu yocingo kuyo. Okwamanje kuzodingeka ukubuyisa idatha egcinwe kwimemori yethu yangaphakathi, njengoba i-WhatsApp uqobo izositshela, ukuze yonke idatha esiyidlulisile kusuka ku-iPhone yethu idluliselwe ku-Android entsha.
Ungawathumela kanjani amavidiyo amade avela ku-WhatsApp futhi ungawasiki
Kuyinqubo elula enamaphuzu ambalwa abalulekile lapho kufanele siqaphele ukuthi singalahli imininingwane, kepha ngalezi ziqondiso ngeke ube nenkinga encane yokukufeza. FUTHIUmphumela uba ukuthi uzoba nayo yonke imilayezo yakho ye-WhatsApp esigungwini esisha, yize kufanele kwaziwe ukuthi ayiphelele, ngoba izingxoxo zibonakala zixaka, futhi izingxoxo ozibeke kungobo yomlando zizovela phakathi. Kepha lokho kuxazululwa ngemizuzu embalwa ukuhlela kabusha i-WhatsApp yakho, futhi okubalulekile, okuyimilayezo, izithombe namavidiyo, ngeke kuthinteke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ukuncintisana » Android » Ungazidlulisa kanjani izingxoxo ze-WhatsApp kusuka ku-iPhone ziye ku-Android noma okuphambene nalokho
Izixhumanisi zokulanda kwiwebhusayithi esemthethweni azisebenzi. Noma yisiphi isixazululo? Bengilokhu ngiphathwa yikhanda ngizama ukudlulisa yonke i-WhatsApp kusuka ku-iOS iye ku-Android inyanga engu-1.
Akusebenzi ngoba kudinga uhlobo olukhokhelwayo, ngaphandle kwalokho inketho yokudlulisa i-WhatsApp ayinikiwe amandla, ingabe ikhona enye indlela yokwenza?
UJair Aicardo Usme Soto kusho
Akusebenzi, konke kuhamba kahle uze uyidlulisele, lapho ikucela ukuthi uyithenge, okungukuthi, uhlobo lwesilingo alwenzi lutho. Noma yisiphi isixazululo?
Phendula uJair Aicardo Usme Soto
Okubi kakhulu, uthenga umbukiso. Akunandaba, kubalulekile ukubuyisa izingxoxo….
Ulandela yonke inqubo …… Akukhathalekile, ukuphela kuhle….
Futhi lapho iqeda ukufaka kabusha i-WhatsApp ... kubonakala sengathi uzokufeza ... kepha cha.
Uqinisekisa ifoni yakho, futhi ikutshela ukuthi uthole ikhophi ... Kepha yeqa ukuthola ikhophi yeDrayivu ...
Akunakwenzeka ukuthola ikhophi lasendaweni noma yikuphi.
Ucabanga ukuthi wenze okuthile okungalungile futhi uqale phansi ...
Futhi uthola i-WhatsApp, ngemuva kokufakwa kathathu, ukukuvimba amahora ambalwa futhi ungakuvumeli uqinisekise inombolo.
Futhi awusenayo ikhophi noma i-whatsapp.
Okokugcina ... akusebenzi ngemuva kwama-try amahlanu. Ukubuyisela akuveli ekugcineni ... amahloni.
Phendula ku-The Scammer
Ingelosi VD kusho
Uhlelo alunikezeli ukuthi kungenzeka ukusuka ku-Android kuya ku-iOS, kusuka ku-iOS kuye ku-Android kuphela, khona-ke isihloko se-tb singamanga.
Phendula ku-Angel VD
Ngiyithengile ezinyangeni ezedlule lapho i-iphone yami ikhiyiwe futhi lapho ngifuna ukuyisebenzisa futhi ukudlulisa amafayela, ibifuna ngiphinde ngiyithenge ...
ayisebenzi, bacela ukubhalisa ukuze baqhubeke nenguqulo yamahhala futhi ekugcineni konke ukuphoqa ukuthenga. Kungamanga
Ngiyabonga! Kumele ngivume ukuthi lapho ngifunda imibono eyedlule benginovalo futhi bengicabanga ukuthi umkhonyovu, kodwa bekungenjalo, yonke imiyalezo yami, izithombe kanye nemisindo yeWhatsApp yadluliswa, yaphazamiseka kepha lokho ebengikudinga kufezekile.
Wenze kanjani? yabelana ngama-parfavarts e-akhawunti yakho yokukhokha
Cela wena ukuthi uthenge uhlelo ...
R. Fdez kusho
Ngempela i- "demo" ayisebenzi ukudlulisa i-WhatsApp, futhi uhlelo luyabiza ngoba ngifuna ukwenza leso sikhathi esingu-1 kuphela.
Kumele bacace futhi zisuka nje bathi wuhlelo olukhokhelwayo, isikhathi, hhayi ukunikela nge- "demo". Okungcono ukubeka ividiyo nesikhathi, ungachithi isikhathi sami. Ahhh nohlelo lwe-damn beludlula kimi, aluniki ithuba lokuluvala, bekufanele ngiphoqe ukuphuma ukuze ngiluvale.
Phendula uR. Fdez
Cacisa ku-athikili yakho ukuthi uhlelo luyakhokhwa, ngakho-ke siyakugwema ukulifaka.
Lo mbhalo usho ngokusobala ukuthi "ungazama mahhala" futhi kwaba njalo ngoJanuwari 2018, ngenkathi ishicilelwa. Njengamanje angazi. Noma kunjalo, wamukelekile.
U-Arturo Hierro kusho
Akuyona mahhala futhi ayisebenzi kahle izikhathi eziningi.
Phendula u-Arturo Hierro
Akusebenzi, ngithathe nemizamo emi-3 futhi lutho. Lezi zinto zikucasula kakhulu kangangokuba ekugcineni ufika esiphethweni sokuthi kufanele ukhokhe. Kepha ugcina ukhethe olunye uhlelo lokusebenza ngaphandle kwefoni kaDkt, ngoba ukhohlisiwe.
Asun, futhi ekugcineni ukufeze ngasiphi isicelo? Ngiyabonga.
Ngidinga ukuhambisa izingxoxo zohlelo lokusebenza ezisuka ku-iphone X ziye kwi-samsung galaxy note 20. Ngifuna ukwazi ukuthi zikwenza ngakuphi ukuhweba?
I-Apple yethula uhlelo lokulungisa mahhala lwenqwaba ye-iPad Air 3
U-Apple uncoma ukuthi abanye babasebenzi bayo basebenze ekhaya